We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာ လွှတ်တော်အမတ် ၃ ဦး သြစတေးလျ အမတ်များနှင့်တွေ့ ဆုံ နေစဉ်
မြန်မာ လွှတ်တော်အမတ် ၃ ဦး သြစတေးလျ အမတ်များနှင့်တွေ့ ဆုံ နေစဉ်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသော အမတ် များ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စနာမင်း
ဦးဇေယျာသော်၊ ဦးဖြိုးမင်း တို့ကို သြစတေးလျ ပါလီမန်အမတ်များနှင့်တွေ့ ဆုံနေပုံဖြစ်ပါတယ်။
9 May 2012 at 09:00
9 May 2012 at 09:02
Crazy. They're yet to be MP. No manner.
9 May 2012 at 09:43
Ko Moe Thee, U jealous right!! I know u man...:)
10 May 2012 at 08:12